ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီအတွက်ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး ဦးထုပ်များ | ခွေးကမ္ဘာ
ဆောင်းရာသီနှင့် နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံး ခွေးဦးထုပ်များ
နတ် Cerezo | 08/11/2021 12:35 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ခွေးဦးထုပ်များသည် တစ်နှစ်တာ၏ အပူဆုံးလများနှင့် ပြင်းထန်သောဆောင်းရာသီတွင် အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ ဦးခေါင်းများကို ကာကွယ်ရန်သာမက ၎င်းတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုးရှင်းစွာ ချစ်စရာကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ခွေးဦးထုပ်များအကြောင်းသာမက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပါမည်။ ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်နည်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်အချို့၊ ချစ်စရာကောင်းသော ထုတ်ကုန်အချို့ကိုလည်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သော အခြားဆောင်းပါးကို ဖတ်ရန်လည်း အကြံပြုလိုပါသည်။ ခွေးငယ်လေးများအတွက် အဝတ်အစားများ- အနွေးထည်နှင့် အင်္ကျီများ ဒါမှ မင်းရဲ့ခွေးလေး အတူတူသွားကြရအောင်။
NITAIUN3Pieces ဦးထုပ်...
Kuoser - ဦးထုပ်အစုံနှင့်...
1 ခွေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဦးထုပ်
1.1 သင့်ခွေးနှင့် သင့်အတွက် ဗီဆာဦးထုပ်
1.2 စတိုင်ကျသောခွေးများအတွက် မွေးနေ့ဦးထုပ်
1.3 နွေရာသီဦးထုပ်နှင့်အတူ visor
1.6 နားနှင့်လည်ပင်းကို ပိုပူစေသည်။
1.7 အပြင်းထန်ဆုံးခွေးများအတွက် ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်
2 ခွေးဦးထုပ်တွေက ဘာအတွက်လဲ။
3 သင့်ခွေးအတွက် အကောင်းဆုံးဦးထုပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
4 သင့်ခွေးကို အသုံးချရန် အကြံပြုချက်များ
သင့်ခွေးနှင့် သင့်အတွက် ဗီဆာဦးထုပ်
Pawaboo2Picece Set ၏...
သင့်ခွေးနှင့်လိုက်ဖက်မည့် ကြီးမားသောပုံစံတူ ဦးထုပ်ပါရှိသည်၊ အနက်ရောင်နှင့် အပြာရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ဦးထုပ်သည် အရွယ်အစားများစွာပါရှိသောကြောင့် သင့်ခွေး၏ဦးခေါင်းနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့်အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ၎င်းသည် သင့်ခွေး၏ဦးခေါင်းနှင့် အကောင်းဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တိုင်းတာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းတာသောတိပ်ဖြင့်နားကို။ ဦးထုပ်တွင် နားရွက်ထည့်ရန် အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ဝတ်ရလွယ်ကူကာ နောက်ကျောတွင် ကတ္တီပါသိုင်းကြိုးဖြင့် ချိန်ညှိထားပြီး မေးစေ့တွင် ပလတ်စတစ်အပိတ်ကြိုးဖြင့် ချိန်ညှိထားသည်။
တစ်ဖက်ကလည်း သုံးစွဲသူအချို့က ထောက်ပြသည်။ ပိုကြီးတဲ့ခွေးတွေအတွက် အရွယ်အစားက နည်းနည်းကျဉ်းတယ်။.
မင်းရဲ့ခွေးကို ဒီကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးထက် ပိုချစ်ရင်၊ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံစံအားလုံးနဲ့ သူ့မွေးနေ့ကို ကျင်းပတာကို ရပ်လို့မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီလှပတဲ့ ကိတ်မုန့်ပုံစံ ဦးထုပ်လေးက စံပြပါပဲ။ အစုအစည်းကို ပြီးမြောက်စေသော ကြိုးဝိုင်းတစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အထည်သည် အလွန်နူးညံ့ပြီး မေးစေ့အောက်တွင် လိုက်ဖက်သော ပလပ်စတစ်အပိတ်ဖြင့် ကြိုးဖြင့် ချည်ထားသည်။ အပြာနဲ့ ပန်းရောင်ဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။ အပျက်သဘောဆောင်သည့်အချက်အနေဖြင့်၊ အရွယ်အစားသည် အနည်းငယ်မျှမျှတတရှိပြီး ရလဒ်သည် ပိုချောနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲသည်ဟု ထင်ရသည်။
Pssopp Cap ခွေး...
una သက်တောင့်သက်သာရှိသော နွေရာသီဦးထုပ်ကို အရောင်သုံးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ (မိုးပြာရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့် အနက်ရောင်)၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး (S မှ L) နှင့် ဂန္ထဝင်ပလပ်စတစ်နှင့် ကြိုးပိတ်တစ်ခု။ ပိုအဆင်ပြေဖို့အတွက် နားရွက်မှာ အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါပါတယ်။ ဤမော်ဒယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း အလွန်လတ်ဆတ်သည့်အပြင် အလွန်ပေါ့ပါးပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းကာ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် နွေရာသီအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ၎င်း၏အထည်အတွက် အထူးထင်ရှားပါသည်။
Zellar Waterproof အတွက်...
သာမာန်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကို မိုးရေဒဏ်မှကာကွယ်ရန်၊ တစ်ကိုယ်လုံးဖုံးထားလျှင် ပိုကောင်းသောကြောင့် ရေစိုခံဦးထုပ်များကို မိုးကာအင်္ကျီတွင် ထည့်လေ့ရှိပါသည်။ ဤမော်ဒယ်ဖြင့် သင်သည် အလွန်လွယ်ကူစွာ ၀တ်ဆင်နိုင်သည် (၎င်းတွင် ကတ္တီပါအပိတ်များပါရှိသည်) ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် ကြိုးနှင့်ကြိုး၊ ထို့ကြောင့် တိရစ္ဆာန်သည် အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး မိုးရေထဲတွင် လုံးဝအမိုးအကာဖြစ်လိမ့်မည်။ အတွင်းပိုင်းကို လေ၀င်လေထွက်ကောင်းစေသော ကွက်ကွက်များ၊ ရောင်ပြန်အကန့်များ နှင့် ဆုများသိမ်းဆည်းရန် သက်တောင့်သက်သာရှိသော အိတ်သေးသေးလေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဤမော်ဒယ်ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် အကောင်းဆုံးမိုးကာအင်္ကျီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာစေပါသည်။
DELIFUR ရယ်စရာ ဦးထုပ်...
သတိထားပါ၊ အကြောင်းမှာ သင့်ခွေးသည် လှပသော ဇာထိုးပန်းထိုးဦးထုပ်ကို ၀တ်ဆင်ထားသည်ကို မြင်သောအခါတွင်၊ မြိတ်တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရနိုင်သည် (ခရစ္စမတ်အရသာ နှစ်မျိုးလုံး၊ Santa Claus သို့မဟုတ် သူ၏ elves တို့၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ) ၎င်းသည် အလွန်နွေးထွေးသော မော်ဒယ်ဖြစ်သည် မျက်နှာအတွက် အပေါက်တစ်ခုနှင့် လည်ပင်းအတွက် နောက်တစ်ခု။ ထို့အပြင် ဘေဘီလည်းဖြစ်၊ တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ နားများအတွက် အပေါက်များ မပါရှိပါ။
ခွေးဦးထုပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် စပ်စုသောထုတ်ကုန်များသည် ဤကဲ့သို့သော နားနှင့်လည်ပင်းကို နွေးထွေးစေပါသည်။ သူတို့က တောင်တွေဆီ လူတွေ ယူသွားတဲ့ ဂန္တဝင် ဘောင်းဘီ နဲ့ လုပ်တယ် ၊ ငါတို့ ဝတ်ပုံ ပေါ် မူတည် ပြီး လည်ပင်း ဒါမှမဟုတ် နားရွက် ကို ဖုံး ထား နိုင် တယ် ။ ခဏနေရင် ထပ်ပြီးတော့၊ ခွေးလေးဟာ ခံစားရမှု နည်းပါးတဲ့အတွက်ကြောင့် မုန်တိုင်းတွေ၊ ပွဲတော်တွေလို တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက် စိတ်ဖိစီးရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီတွင် ခေါင်းဆောင်ကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခု သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ။
သင့်အား အကြံပြုခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ မကုန်ဆုံးချင်ခဲ့ပါ။ အသုံးဝင်ဆုံး ခွေးဦးထုပ်များထဲမှ တစ်ခု (အအေးနှင့် အပူဒဏ်ကို မကာကွယ်နိုင်) သို့သော် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံး ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည်- ဤ cowboy ဦးထုပ်၊ ၎င်း၏ကျယ်ဝန်းသောအနားပတ်နှင့် ၎င်း၏ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သောအထည်နှင့်အတူ။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် Dallas မှထွက်ခွာသွားပုံရသည်။
ခွေးများအတွက်ဦးထုပ် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရန်သာမက ပန်းခြံထဲတွင် အချစ်စရာကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။အထူးသဖြင့် မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အများအပြားရှိသည်။
ပထမဦးစွာ ဦးထုပ်များသည် အအေးဒဏ်ကို ကောင်းစွာကာကွယ်ပေးသည်။အထူးသဖြင့် သိုးမွေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားလျှင်။ ရာသီဥတုပူပြင်းသော သို့မဟုတ် နည်းသောနေရာတွင် နေထိုင်ပါက ဦးထုပ်ဆောင်းရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် သို့မဟုတ် နှင်းများရှိနေပါက ဦးထုပ်သည် သင့်ခွေးကို နွေးထွေးစေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ အဖွားပြောသလို အအေးမိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ခြေထောက်နှင့် ဦးခေါင်းကို နွေးထွေးစွာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ဦးထုပ်များသည် အပူရှိန်တွင် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ဤကိစ္စတွင် ၎င်းတို့ကို ဦးထုပ်များဟု ခေါ်ခြင်းသည် ပိုကောင်းသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ၎င်းတို့တွင် visor ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးထုပ်သည် လူသားများကဲ့သို့ပင် နေရောင်ခြည်နှင့် အပူဒဏ်မှ ခွေး၏ဦးခေါင်းကို နေရောင်သာမက မျက်လုံးကိုပါ ကာကွယ်ပေးထားသောကြောင့် ဦးထုပ်သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ရှောင်ရှားပါသည်။
နောက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအရေးပါသော, မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာ မင်းရဲ့ခွေးကို အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ရေစိုခံဦးထုပ်နဲ့ ဦးထုပ်တွေက အရမ်းကောင်းတယ်။တောင်ပံ၏ကျေးဇူးကြောင့် (အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည် တံငါသည်ဖြစ်လျှင်) ရေသည် သင့်မျက်လုံးထဲသို့ ဝင်လာလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့် သင့်အား ပို၍သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
သင့်ခွေးအတွက် အကောင်းဆုံးဦးထုပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဦးထုပ်ရွေးရတာ ခက်နိုင်သည် (တောင်းပန်ပါတယ်၊ စာလုံးက သည်းမခံနိုင်ဘူး) အဲဒါကြောင့်၊ ဤအကြံပြုချက်များသည် အသုံးဝင်နိုင်သည်။:
အရွယ်အစားကို ကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ။ အိုကေ၊ ဒါဟာ အခြေခံတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့် Cujo အတွက် tiara အသစ်ဝယ်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကောင်းကောင်းလိုက်ဖက်ပြီး ပြုတ်ကျတာ ဒါမှမဟုတ် တင်းကျပ်မနေစေဖို့ သူ့ခေါင်းကိုတိုင်းဖို့ မေ့သွားတာက လွယ်ပါတယ်။ တိုင်းတာမှုများကွဲပြားနိုင်သောကြောင့် မော်ဒယ်တစ်ခုစီနှင့်ကြည့်ပါ။
သင် ဘာအတွက် သုံးမလဲ စဉ်းစားပါ။ မိုးရွာရင် နေအရမ်းပူလို့ အေးရင် မိုးရွာရင် ဦးထုပ်တစ်မျိုးတည်း မလိုပါဘူး။ အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း အအေးဒဏ်ကြောင့် သိုးမွှေးဦးထုပ် သို့မဟုတ် အခြားအနွေးထည်များကဲ့သို့ ဘာမှမရှိပါ။ နေရောင်အတွက်၊ ထုပ်ပိုးပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ အထည်နဲ့ မိုးရေအတွက်၊ တံငါဦးထုပ် ဒါမှမဟုတ် ရေစိုခံထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ visor ပါတဲ့ ဦးထုပ်။
သင့်ခွေး၏နှစ်သိမ့်မှုအပေါ် လောင်းကြေးထပ်ပါ။ ယင်းအတွက်၊ အရွယ်အစားကို အနီးကပ်ကြည့်ရန် အကြံပြုထားရုံသာမက အခြားဒြပ်စင်များကိုပါ ဥပမာအနေဖြင့်၊ အထည်သည် ယားယံသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် အပိတ်ပြုလုပ်ထားလျှင် မေးစေ့အောက်ရှိ ရာဘာအမြှေးပါး ဖြစ်နိုင်သည်၊ ကတ္တီပါ သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်အပိတ်ဖြင့် ကြိုးတစ်ချောင်း။ နားအပေါက်ပါသော ဦးထုပ်များသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသောကြောင့် အကြံပြုထားသည်။
သင့်ခွေးကို အသုံးချရန် အကြံပြုချက်များ
အချို့သော ခွေးများသည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကို ဝန်ခံကြပြီး ၎င်းတို့သည် သဘာဝကျသော မော်ဒယ်များဟုပင် ထင်ရသည်။ နိုင်ငံခြားကမြင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို လက်ခံဖို့ ခက်တယ်။. ၎င်းတို့ကို အသုံးချရန်-
သေချာအောင်လုပ်ပါ အရွယ်အစားမှန်ကန်သည်။ ဒါမှ ဦးထုပ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင်ထားပါ။ ပိုတည်ငြိမ်လေ (တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ) ခံနိုင်ရည်ရှိလေလေ၊
မတင်ခင် အရင်စလုပ်ရအောင်၊ အနံ့နှင့် ရင်းနှီးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။.
တချို့ကို ပေါ်တင် နေ့စဉ် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် လေ့ကျင့်ပါ။.
နောက်ဆုံးနည်းလမ်းမရှိရင် အဲဒါကိုအတင်းမခိုင်းနဲ့. နေရောင်ကို စိတ်ပူပါက အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ခွေးများအတွက် နေကာမျက်မှန်များကဲ့သို့) သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် နေကာခရင်မ်ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အပူဆုံး၊ အအေး သို့မဟုတ် မိုးသည်းထန်စွာရွာသည့် နာရီများကို ရှောင်ရှားရန်လည်း သင်ကြိုးစားနိုင်သည်။
ခွေးဦးထုပ်တွေဝယ်လို့ရတဲ့ အမျိုးမျိုးသောနေရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။သူ့ရဲ့ လွယ်ကူတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် မော်ဒယ်တွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် ဘယ်ဟာက ပိုချစ်စရာကောင်းလဲ။ ဥပမာအားဖြင့်:
En အမေဇုံအထက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုထားသော ကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတွင် သင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့တွင် ကားသုံးစီးကို ရပ်တန့်ရန် မော်ဒယ်များ ရှိပြီး ရိုးရှင်းသောဖြတ်တောက်မှု နှင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး ဆန်းပြားသော ကားသုံးစီးရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ သင်သည် Prime option ကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက၊ သင့်တွင် ၎င်းကို မည်သည့်အရာမျှ အိမ်တွင် မရှိပါ။
En အထူးပြုစတိုးဆိုင်များ TiendaAnimal သို့မဟုတ် Kiwoko ကဲ့သို့ ခွေးများအတွက် ဦးထုပ်အနည်းငယ်လည်း ရှိသည်။ ဤရွေးချယ်စရာများအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များပါရှိခြင်းဖြင့် အရွယ်အစားနှင့် မော်ဒယ်သည် သင်နှင့် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့လိုချင်သည့်အရာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ကြည့်ရှုရန် ၎င်းတို့ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ တခြားအလွန်ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေကို မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ ဥပမာ၊ portals တွေလိုမျိုး ဝဘ်စာမျက်နှာတွေနဲ့ ပရိုဖိုင်တွေ အများကြီးရှိတယ်၊ Etsy လက်လုပ်ဦးထုပ်တွေ ဘယ်မှာရောင်းလဲ။ သံသယမရှိဘဲ၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဦးထုပ်ကို မူရင်းနှင့်ထူးခြားစေလိုပါက ၎င်းတို့သည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်နှင့် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သော ဤခွေးဦးထုပ်များကြားတွင် သင့်အား ကူညီပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဦးထုပ်ဆောင်းဖူးသလား၊ မင်းမှာ အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်ရှိလား။ ကျင့်သုံးဖို့ အများကြီး လိုသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ဆောင်းရာသီနှင့် နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံး ခွေးဦးထုပ်များ
ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံး cones နှင့် ၎င်းတို့၏ အခြားရွေးချယ်စရာများ